PressReader - Kwayedza: 2018-10-12 - Tishamwaridzane
Kwayedza - 2018-10-12 - Tishamwaridzane -
MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: kwayedza@zimpapers.co.zw kana kutumira sms panhamba dzinoti: 0714 200 007.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndogara kwaMutare uye ndotsvagawo musikana wekuvaka naye musha ane makore 18 - 20. Nhare yangu 0775 318 529, mazvita.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 30, handina mwana uye ndotsvagawo murume anoda zvekuvaka musha ane makore 35 - 45 asina chirwere uye anonamata. Anondida anondibata pa0771 166 964.
***** Makadiiko vechino chirongwa? Ndiri mudzimai ane makore 38, ndinotsvagawo murume wekuvaka naye musha ane makore 55 - 60. Ndinoda anoshanda muHurumende. Hutano negative, andifarira anondibata pa0771 616 094.
***** Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 46, ndinodawo shamwarikadzi yakavimbika. Ini handisi pamushonga Zvakawanda tozotaura, nhare dzangu 0772 704 803.
Ndiri mukadzi ane makore 36, ndinotsvagawo murume ane makore 50 zvichidzika asiri pamushonga. Anoda ngaandibate pa0785 565 751.
Makadii? Ndinotsvagawo musikana wekuwanana naye kana ane mwana 1, ane makore 19 kusvika 23. Nhamba dzangu 0771 217 368, andida fona kana kuisa meseji.
Ndiri mukadzi ane makore 27 nevana 2, ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ane makore 30 kusvika 35. Zvakawanda tozotaura, anoda ngaandibate pa0774 250 318.
***** Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa ndogara muHarare uye ndotsvaga mukadzi kana musikana ane makore 30 zvichidzika asina chirwere. Anoda ngaandibate pa0777 605 436.
Ndiri murume ane makore 39, ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi anoda imba asina chirwere, ini handina. Ngaave anoda kunamata. Anoda kundibata foni nhamba dzangu idzo 0782 193 768.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana ane makore 19 - 23. Zvakawanda totaura pafoni, andifarira ngaandibate pa0782 721 462.
***** Ndinonzi Misheck, ndiri kuZhombe ndine makore 23, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20 asina chirwere. Akanaka nhare yangu 0776 858 709.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 22, ndinodawo mukomana ari pachokadi ane makore 24 kana 25 anomukira kubasa. Nhamba dzangu i0778 718 450.
Makadini VeTishamwaridzane? Ndiri mukomana
ane makore 20, ndinodawo musikana asiri pamushonga. Ngaave nemakore 18 zvichikwira, nhamba dzangu 0784 660 819.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 20 ndinodawo musikana ane makore 19. Handina chirwere, anoda ngaandibate pa0784
Ndiri mukadzi ane mwana 1, ndinotsvagawo murume wekuroorwa naye ari pachokwadi asina mukadzi. Ndinonamata kuThe African Apostolic kwaMwazha. Andifarirawo ngaandibate pa0785 159 048. Zvakawanda tinozotaura, ndiri negative saka ndinodawo ari negative. Ngaave nemakore 29 kusvika 40.
Ndiri murume ane makore 41 nemwana 1, ndodawo mukadzi ari pachokwadi ane makore 38 zvichidzika. Nhamba dzangu 0717 033 167.
Makadii? Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvaga mukadzi ane makore 29 kusvika 34. Ini ndine mwana mumwe chete uye ndinoshanda. Nhare yangu 0773 565 548.
***** Makadii? Ndiri murume ane makore 40, ndoda mukadzi akavimbika, zvakawanda totaura. Andifarira ndibatei chero nguva apa 0778 004 529.
Makadii vechirongwa? Ndiri murume ane makore 30, ndotsvagawo mukadzi wekuroora. Ngaave ari pamushonga, kunyanya wekumusha. Anoda anondibata pa0775 509 568.
Ndiri murume ane makore 35, ndodawo shamwarikadzi yekufambidzana nayo inozvishandira isina chirwere inogara muChiredzi kana Triangle. Nhare yangu 0778 265 607.
***** Ndodawo musikana ane makore 22 - 29 asina mwana, handina kumboroora. Ndine makore 34 uye ndinoda anoenda kuchechi. Nhamba yangu 0785 526 477. Ndinoda kunyanya wekuChinhoyi. Ngaave ari mudzidzisi kana anogona zvekurima, akavimbika. Nhare yangu 0785 526 477. *****
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 29 nevana vatatu. Ndinotsagawo murume anoda zvekuroora ari pachokwadi uye ari pamushonga seni asi asingaratidzike. Andida ngaandibate pa0717 991 014, ndatenda.
Makadii? Ini ndinotsvakawo mukadzi wekuvaka naye imba asiri pamushonga ane makore 29 kusvika 36. Vanoda ndibatei pa0784 876 655.
Ndiri murume ane makore 46, ndoda mudzimai ane makore 35 kusvika 42 okuzvarwa. Nhamba dzangu 0776 724 615.
***** Makadini? Ndiri mukomana ane makore 28, handisati ndawana musikana anondida. Anoda anondiwana pa0776 150 878.
Makadii vechirongwa? Ndiri mukadzi ane makore 40 nemwana 1. Ndoda murume ane makore 40 - 50, ndozvishandira uye ndoda air HIV + asingaratidzike seni. Ngaave anofarira mvura yekugezawo. Andifarira nhamba dzangu idzo 0713 831 649 kana anoda upenyu hwekumusha ndoda. *****
Makadii veKwayedza? Ndave nenguva ndichinyorera, ndinotsvagawo musikana ane makore 21 zvichidzika. Ndine makore 26, nhare yangu 0734 407 377.
***** Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27, ndotsvagawo mukadzi ane makore 22 kusvika 32 ane mwana umwe. Ndibatei pa0774 606 250.
Ndiri murume ane makore 38 nevana 2. Ndinotsvagawo mudzimai ane makore 34 kusvika 36. Kana pane andida ngaandibate pa0733 386 142.
Makadii veKwayedza? Ini ndinonzi Onias ndinogara kuBindura ndodawo musikana ane makore 20 kana 19 chete. Ini ndine makore 28 ngaandibate pa0713 814 054.
***** Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 18 nemwana 1, ndinotsvagawo murume ane makore 23 kusvika 27. Ndiri HIV negative, ndogara muHarare. Andifarira anondibata pa0735 553 164.
***** Ndodawo mukadzi anoda zvekuroorwa, ndine makore 35 ekuberekwa nevana 2. Ndoda ane makore 18 kusvika 30 ari pachokwadi. Andida ndinobatika pa0783 247 570.
Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo mudzimai anoda zvemusha. Andifarira anofona totaura pa0733 156 395.
Ndiri murume ane makore 42, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane vana 2, ari serious uye ari pamushonga. Ndinobatika pa0771 158 994.
***** VeTishamwaridzane makadini? Ndiri murume ane makore 36, ndinodawo shamwarikadzi inogeza, ane hutano, akanaka samare ane ganda rinotsvedzerera, rinopenyerera nekunhuwirira zvinotapirira nekuyemudza. Ngaave akaumbwa zvinoyevedza ndiye wandiri kuda kuwadzana naye mumazirudo. Ngaasunungeke kubatana neni pa0712 774 011.